Jeneraly - Vaovao Gadget | Vaovao Gadget (Pejy 5)
Facebook dia manambara ny fizarana blockchain vaovao. Fantaro bebe kokoa momba ny fizarana vaovao an'ny orinasa izay miditra amin'ny tsenan'ny cryptocurrency
Google I / O dia mamela vaovao marobe amintsika ary ny sasany amin'izy ireo dia tena mahaliana tokoa satria ireo izay hanampy ao amin'ny ...
Ticketmaster dia mijery ny fanesorana ny tapakila sy fampiharana ny fanekena ny tarehy
Ticketmaster dia mieritreritra ny hametraka fomba vaovao hamonjy filaharana amin'ny kaonseritra. Izy io dia ny famelana ny fidirana amin'ny alàlan'ny fanekena ny tarehy sy ny fanariana ny raikipohy tapakila
Tsy ho ela dia azo atao ny manamory fiaramanidina DJI avy amin'ny fitaovana misy Windows 10
Toa sambatra daholo ireo mpampiasa manana fitaovana Microsoft ary manana drone marika DJI….
Glitch lozisialy ao amin'ny rafitra mahaleo tena mety meloka amin'ny fianjerana Uber
Ny tsy fahombiazan'ny rafitra mizaka tena nahatonga ny lozam-pifamoivoizana Uber. Fantaro misimisy kokoa ny antony nahatonga ny lozam-piarakodia mahaleo tena Uber tamin'ny volana martsa.
Nintendo Switch Online dia hanana tahiry rahona
Nintendo Switch Online dia hanomboka ny asany amin'ny volana septambra. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny serivisy an-tserasera ho an'ny console sy ireo karazana famandrihana hitanay.
Hanomboka haneho doka amin'ny endriny manaraka i Firefox rehefa hanokatra tabilao vaovao izahay
Ny Mozilla Foundation dia nanambara fotsiny fa ny kinova Firefox manaraka dia hanomboka haneho doka isaky ny manokatra takelaka vaovao izahay.
2.000 ny fiheverana diso amin'ny fanekena ny tarehy tamin'ny lalao famaranana farany tamin'ny Champions League
Vokatry ny diso diso an'arivony maro any Wales. Hijery misimisy kokoa momba ny glitches famantaran-tarehy amin'ny lalao final an'ny Champions League tamin'ny taon-dasa.
Ahoana ny fomba fampidirana sy fanaovana ebook mifanaraka amin'ny Kindle anao amin'ny alàlan'ny Telegram
Te hahafahanao mamaky ny ebooks rehetra ao amin'ny Kindle ve ianao na dia tsy endrika MOBI aza? Mangina satria miaraka amin'ny Telegram sy ny bot "To Kindle Bot" dia ho azonao mora foana izany
Ny NVIDIA dia manafoana ny programa mpiara-miasa mampiady hevitra
NVIDIA dia manambara ny fanafoanana ny programa mpiara-miasa aminy. Fantaro bebe kokoa momba ny fanambarana ny faran'ity programa mpiara-miasa amin'ny orinasa ity.
Waymo's Shift: Fiara Google dia voadona tamin'ny lozam-pifamoivoizana
Taorian'i Tesla sy Uber dia fotoana fohy talohan'ny nahatongavan'ireo mpamokatra hafa izay mamorona rafi-pitaterana mizaka tena: Waymo.
Izahay dia mamakafaka ny Huawei P20 ny fiasa rehetra amin'ny haitao avo lenta amin'ny vidiny tsara indrindra
Huawei P20, iray amin'ireo terminal avo lenta izay manome ny endri-javatra tsara indrindra, mametra ny vidiny ambanin'ny 600 euro. Izahay dia mitondra anao ny mampiavaka azy sy ny fahombiazany tamin'ity fanadihadiana ity.
YouTube dia manana mpampiasa voasoratra anarana 1.800 miliara isam-bolana
YouTube dia efa manakaiky ny 2.000 lavitrisa mpampiasa nisoratra anarana. Fantaro bebe kokoa momba ny isan'ny mpampiasa mampiasa isam-bolana.
Ny iPhone X no telefaona be mpividy indrindra tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2018
Ny iPhone X no telefaona be mpividy indrindra tamin'ny telovolana voalohany. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra telefaona Apple amin'ny telo volana voalohany amin'ity taona ity.
Spotify dia manana mpanjifa 75 tapitrisa
Ny serivisy mozika streaming Spotify, dia nanambara fa efa manana mpanjifa 75 tapitrisa, raha toa ka mahatratra 99 tapitrisa ny isan'ny mpampiasa ny kinova maimaim-poana.
Nanamafy ny fanakanana ny Telegram i Russia
Mihamafy ny fanakanana ny Telegram any Russia amin'ny fepetra vaovao. Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra vaovao noraisin'izy ireo tao amin'ny firenena hisorohana ny fidiran'ny mpampiasa ny fampiharana.
Koogeek Smart Dimmer, nandinika ity jiro mifanentana amin'ny HomeKit ity izahay mba hahatonga ny tranonao ho hendry
Hiresaka momba ny Koogek Smart Dimmer isika, switch ho an'ny tranontsika izay hahafahantsika manao ara-bakiteny izay tiantsika amin'ny jiro.
Ahoana ny fanovana ny teny miafinao Twitter
Ny fanovana ny teny miafinao ao amin'ny Twitter dia dingana iray tena tsotra izay afaka minitra vitsy. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanovana ny teny miafin'ny Twitter
EmerData, ilay orinasa manafina ireo mpitantana ao amin'ny Cambridge Analytica
Toa tsy ny rehetra no voalaza momba ny raharaha Cambridge Aanalytica izay manahirana. Ary ny talata lasa teo ve dia nanambara ...
Ny lesoka iray amin'ny fiarovana ny Twitter dia manoro hevitra antsika hanova ny teny miafina
Toa tsy misy olona voaro amin'ny olana mifandraika amin'ny fiarovana ny teny miafina ary amin'ity tranga ity ...
Telegram dia manafoana ny ICO nanangona 1,7 miliara. Fantaro misimisy kokoa ny antony nanafoanan'ny orinasa ity ICO ity.
Fanadihadiana AutoFlight VR Drone
Jereo ny VR Drone Autoflight, drone amin'ny ambaratonga fidirana misy fakantsary HD zoro malalaka, solomaso FPV ary bateria 15 minitra sidina mandritra ny € 199 ihany. Izy io koa dia manana bokotra fidinana sy fivoahana mandeha ho azy, fanaraha-maso tanteraka, hafainganam-pandeha 2 ary fomba akrobatika. Eto ianao manana ny famerenana feno miaraka amin'ny fanadihadianay.
Mikatona maharitra i Cambridge Analytica
Cambridge Analytica mikatona ary mijanona tsy mihetsika intsony ny asany. Hijery misimisy kokoa momba ny fanidiana miharihary ny orinasa taorian'ny tantara ratsy nataony tamin'ny Facebook.
Huawei dia mety mamorona ny rafitra fiasany manokana
Ny orinasan-tserasera aziatika Huawei dia miasa amin'ny rafitra fiasany manokana ho solon'ny Android, raha toa ka sazy ihany koa ny governemanta amerikana noho ny fihoarany ireo sakana amerikana any Iran.
18 volana tsy afaka nitondra fiara satria copilot niaraka tamin'ny Tesla Autopilot izy
Fantaro bebe kokoa ny faharesen-dahatra nataon'ny teratany anglisy iray izay nitondra fiara tamin'ny alàlan'ny autopilot ny fiarany Tesla ary nipetraka teo amin'ny fipetrahan'ny mpandeha.
Instagram sy WhatsApp dia hanana antso anaty vondrona video
WhatsApp sy Instagram dia hanana fanohanana amin'ny fiantsoana horonantsary vondrona. Fantaro bebe kokoa momba ilay fisehoan-javatra vaovao ho tonga amin'ireo fampiharana roa tonta atsy ho atsy.
Ny rafitry ny infotainment an'ny VW sy Audi dia mety ho voajirika ary manome alalana ny angon-drakitrao
Ny rafitry ny infotainment an'ny VW sy Audi dia voajirika lavitra ary nahita fa mampahafantatra vaovao marobe momba ny mpamily sy ny finday mifandraika aminy
Olona an'arivony no manohitra ny fanakanana ny Telegram
Olona 12.000 no nanohitra ny fanakanana ny Telegram any Russia. Fantaro misimisy kokoa ireo fihetsiketsehana nitranga omaly tao an-tanànan'i Moskoa.
Io no endrik'ilay orinasa mpamokatra herinaratra niokleary voalohany nataon'olombelona
I Russia no firenena voalohany nanangana toby nokleary mitsingevana, tsangambato vaovao amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona izay hamela ny firenena hamatsy herinaratra sy hafanana amin'ireo tanàna indostrialy any avaratry ny firenena midadasika.
Ny mpanorina sy ny CEO an'ny WhatsApp, Jan Koum dia nanambara fa hiala amin'ny toerany izy. Toa tsy maharesy lahatra azy ny fifandraisana ratsy amin'i Mark Zuckerberg sy ny fanapahan-keviny.
Snapchat dia hampiditra doka enina segondra tsy maintsy atao. Fantaro bebe kokoa momba ity fepetra vaovao kasain'ny orinasa ampidirina ity izay hiteraka resabe.
Ny Nokia X dia haseho amin'ny 16 Mey
Nokia dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Nokia X amin'ny 16 Mey. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona voalohany an'ny marika hampiasana ny notch, izay ho tonga afaka roa herinandro.
Telegram dia nidina nandritra ny ora maro noho ny hafanana tao amin'ireo mpizara azy
Ny sehatra fandefasan-kafatra Telegram dia lasibatry ny fanafihana DDoS, izay nahatonga ny sasany amin'ireo mpizara azy hanafana be.
Airbus sy Audi dia manambatra hery hanamafisana ny serivisy fiaramanidina fiaramanidina ataon'izy ireo
Airbus sy Audi dia mampiroborobo ny serivisy fiarakaretsaka amin'ny tanàn-dehibe. Fantaro misimisy kokoa momba ny fifanekena teo amin'ireo orinasa roa izay niara-niasa nandritra ny fotoana ela.
Apple dia miasa amin'ny solomaso fampitomboana
Apple dia miasa amin'ny solomaso fampitomboana. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny orinasa amerikana mikasa ny hanangana ity vokatra ity amin'ny taona 2020.
Nampiakatra ny vidin'ny tahan'ny any Norvezy ny Spotify
Spotify dia manambara ny fiakaran'ny vidiny ho an'ny tahan'ny any Norvezy. Fantaro misimisy kokoa ny fiakaran'ny vidin'ny orinasa any amin'ny firenena Skandinavia. Zavatra tsy azon'izy ireo atao any amin'ny firenen-kafa koa.
Opera Touch, mpitety tranonkala finday azonao ampiasaina amin'ny tanana iray
Opera Touch no fitetezana finday vaovao an'ny orinasa hamela anao hitantana ny zava-drehetra amin'ny tanana iray monja. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy afa-tsy amin'ny Android
Steven Spielberg dia nilaza fa nilalao an'i Mario tamin'ny PlayStation izy
Steven Spielberg dia nanambara tamin'ny haino aman-jery japoney nandritra ny fampiroboroboana ny Ready Player One, fa nilalao an'i Mario tamin'ny PlayStation izy hanomanana ny famokarana ilay sarimihetsika.
Hanomboka hanana ny fitadidiany i Alexa
Hanomboka hanana ny fitadidiany ny Alexa's Amazon. Fantaro bebe kokoa momba ireo fiasa vaovao tonga amin'ny mpanampy ny orinasa tsy ho ela.
Ahoana no hikarohanay ny kiheba Chrome misokatra rehetra
Raha te-hitady teny ao amin'ireo takelaka rehetra misokatra ao amin'ny tranokalanay Chrome izahay dia tsy maintsy mampiasa ny fanitarana antsoina hoe Search Plus.
Polestar 1, ny coupe hybrid avy any Volvo dia mitentina 155.000 Euros
Polestar 1 dia cuopé lafo vidy novokarin'i Volvo ary hisy vidiny 155.000 Euros rehefa mandeha eny an-tsena amin'ity taona 2018 ity
Noraran'i Belzika ny boaty handroba amin'ny lalao video
Baoritra fandrobana amin'ny lalao video voarara any Belzika. Fantaro misimisy kokoa ny fanapahan-kevitry ny minisiteran'ny fitsarana ao amin'ny firenena hamarana ny boaty handroba amin'ny lalao
Misaotra an'i NVIDIA tsy mila manam-pahaizana PhotoShop intsony ianao hanovana sary toy ny pro
Ny NVIDIA dia mampiseho amintsika ny valin'ny rindrambaiko voalohany afaka manova ny sary ho azy tanteraka, zavatra izay hahatonga anao tsy mila mahafantatra ny fomba fikirakirana ny PhotoShop toy ny matihanina.
Taorian'ny Apple sy Twitter, dia i Google izao no manova ny emoji-basy
Google dia nisafidy ny hitsambikina amin'ny sarin'ny fanovana ny emotikon sasany, ary nanova ny emoticon pistol ho an'ny pistola rano miaraka amin'ny fitehirizam-bokatra.
Google lasa matotra ary maniry ny hiatombohan'ny terminal vaovao rehetra miaraka amin'ny Android Oreo
Marina fa ny mpanamboatra dia tompon'andraikitra amin'ny ampahany amin'ny sombin-javatra misy ao amin'ny Android ankehitriny, ny marina ...
Spotify mandefa ny kinova vaovao maimaim-poana: mozika maimaim-poana bebe kokoa ary veloma amin'ny maody kisendrasendra
Spotify manavao ny kinova maimaim-poana miaraka amin'ny fanatsarana isan-karazany. Fantaro misimisy kokoa ny fanovana izay tonga amin'ny faran'ny Random Mode sy ny maody izay mandany angona 75%.
WhatsApp dia manitsy ny fepetra vaovao hanan-kery amin'ny 25 Mey manerana an'i Eropa. Ary noho izany dia hahafahan'ny mpampiasa misintona kopia feno amin'ny angon-drakitra rehetra ataon'izy ireo
Nampitandrina i mikofof fa efa omanina ny fanavaozana ny volana aprily, fampisehoana Windows vaovao vaovao misy endrika vaovao maro ary holazainay aminao hoe iza no tena ilaina indrindra.
Ny Nintendo Switch dia voajirika ihany tamin'ny farany ary tsy misy afaka manamboatra azy io
Ekipa roa natokana ho an'ny fampandrosoana ny fitrandrahana toy ny FailOverflow sy ReSwitched no nahavita nijirika ny Nintendo Switch nanararaotra olana iray tamin'ny sock an'ny Nvidia Tegra X1, tsy fahombiazan'ny Nintendo tenany ihany.
Ahoana ny fampidinana ny atiny Instagram rehetra
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny fomba ahazoanay kopian'ny atiny rehetra navoakanay tao amin'ny tambajotra sosialy Instagram, tambajotra sosialy izay eo ambanin'ny elo Facebook.
Maty ilay CD mba hanomezana lalana ny fandefasana mozika
Mazava be ny lohateny ary ny mozika amin'ny CD ve manjavona mandalo, tonga daholo izany ...
HyperX Pulsefire Surge, averinay jerena ity totozy filalaovana milimetatra ity
Izahay dia mitondra anao ny famakafakana ny totozy filalaovana Pulsefire Surge, vokatra HyperX.
Chat: safidy vaovao Google ho an'ny WhatsApp
Chat: Fampiharana fandefasan-kafatra vaovao an'ny Google. Fantaro bebe kokoa momba ny fampiharana fandefasan-kafatra vaovao izay hatomboky ny orinasa tsy ho ela.
Ity no efitranon'ny hotely ho an'ny mpilalao noforonin'i Alienware
Izany no fomba niarahan'ny Alienware niaraka tamin'ny hotely Hilton Panama City hamoronana ilay efitrano filalaovana tonga lafatra, ary ny tena izy dia nahavita tsara be ry zareo.
Eo am-pelatanantsika ny famolavolana ny iray amin'ireo tilikambo fanamafisam-peo izay manome fifandanjana tsara indrindra eo amin'ny kalitao sy ny vidiny eny an-tsena, ny Energy Tower 8 G2 Wood.
Te hahafantatra izay rindranasan'ny antoko fahatelo mahazo fidirana amin'ny data Google-nao ve ianao? Manome anao ny fahafantarana ny lisitra feno sy ny fisintomana ny fahazoan-dàlana ny orinasa Internet raha irinao. Atorinay anao ny fomba fanaovana azy
WikiLeaks dia tsy afaka mampiasa ny kaontinao Coinbase intsony. Fantaro bebe kokoa momba ity fanakanana izay manimba ny famatsiam-bola WikiLeaks ity ary mila mahita fomba famatsiam-bola vaovao ianao.
Netflix dia mampiditra ny Stories amin'ny fampiharana azy ho an'ny iOS. Fantaro bebe kokoa momba an'io fiasa vaovao natolotry ny serivisy streaming io ao amin'ny fampiharana azy ary ho avy tsy ho ela amin'ny Android izy io.
Daisy: ny robot vaovao an'i Apple izay manimba iPhones
Daisy: Ilay robot Apple izay manimba iPhones 200 isan'ora. Fantaro bebe kokoa momba ity robot Apple ity izay ny asany dia ny manasaraka ireo singa sarobidy amin'ny telefaona ary hamerina izany amin'ny fomba tsara indrindra.
World Jurassic: ny fanjakana nianjera dia mandahatra ny tranofiara farany
Ny tranofiara farany ho an'ny World Jurassic: Fallen Kingdom dia eto. Fantaro bebe kokoa momba ny tranofiara farany ho an'ny fizarana vaovao amin'ny andian-tsarimihetsika malaza izay havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana Jona.
Netflix miloka any Eropa, ity no atiny vaovao amin'ny famokarana nasionaly izay ho avy
Netflix dia nanambara famokarana vaovao folo tany Eropa izay hamela antsika hiteny.
Afaka mividy amin'ny Amazon USA ianao na aiza na aiza
Ary moa ve ny orinasa vao nanokatra ny vanim-potoana ary afaka mividy ny vokatra rehetra ao amin'ny magazay ianao ...
Microsoft mandefa ny extension Windows Defender ho an'ny Chrome
Ireo tovolahy avy ao Redmond dia nandefa fanitarana vaovao ho an'ny tranokala Chrome izay ahafahan'ireo mpampiasa ity navigateur ity mankafy ny Windows Defender
Ahoana ny fomba hanampiana hitsin-dalana amin'ny keyboard amin'ny fampiharana "Snipping" ao amin'ny Windows 8 sy Windows 10
Te hamorona hitsin-dàlana fitendry amin'ny rindranasa Windows Snipping ianao? Ity dia iray amin'ireo fomba hanombohana haingana ny fampiharana amin'ny fomba macOS madio indrindra
Sonos dia miara-miasa amin'i HAY handefa maodely iray fanontana voafetra
Sonos, mpanamboatra mpandahateny, Sonos dia niara-niasa tamin'ny mpamorona fanaka ankehitriny HAY handefa paleta miloko vaovao ho an'ny Sonos One.
Android P dia mety hanana fihetsika amin'ny efijery toy ny an'ny iPhone X
Android P dia mety manana ny fitetezana fihetsika an'ny iPhone X. Jereo bebe kokoa momba ity fiasa ity izay mety ho ampahany amin'ny rafitra fiasa.
Sintomy ny kopian'ny data rehetra avy aminay amin'i Google
Raha liana te hahafantatra izay fantatr'i Google momba anao ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba ahafahantsika misintona ny atiny rehetra nozarainay ary manohy manao izany mandritra ny fampiasantsika ny serivisin'izy ireo.
Nidina erak'izao tontolo izao ny Twitter ary niteraka korontana
Ny tambajotra sosialy fanta-daza dia niatrika fahatapahana dizitaly androany tolak'andro tamin'ny 15:54 hariva manerantany ary tsy nisy ...
Mandinika ny Antoko Angovo 6 izahay, ny herin'ny Energy System handaminana ny antoko misy anao
Miaraka amina endrika mahery vaika sy mahery setra, miaraka amina jiro LED vitsivitsy, dia handinika amin'ny antsipirihany tanteraka ny angovo antoko 6 isika, hijanona miaraka aminay ary hahita izay mahatonga ity tilikambo feo ity ho manokana, natao ho zavatra maro ary ambonin'izany rehetra mihetsika. , efa ela isika no tsy nahita zavatra toy izany.
Movistar dia manolotra ny tahan'ny optika 50 Mb Fiber amin'ny vidiny manokana
Movistar: 50 Mb Fiber Optic Rate amin'ny fampiroboroboana amin'ny vidiny manokana. Fantaro bebe kokoa momba io taha io izay misy amin'ny fampiroboroboana amin'ny vidiny manokana. Karamao izao!
Apple dia hanamboatra ny Apple Watch Series 2 miaraka amin'ny olan'ny bateria maimaim-poana
Raha manana 2mm Apple Watch Series 42 ianao ary miaina olana momba ny bateria dia fotoana mety izao hanontaniana momba ny programa fanamboarana.
Ny andiany Espaniola La casa de papel no lasa be mpijery indrindra amin'ny fiteny tsy anglisy amin'ny Netflix
Nandritra ny kaonferansa valin'ny toe-karena nifanandrify tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2018, nanamafy i Netflix fa ny andiany Espaniola La casa de papel no nanjary andiany be mpijery indrindra tamin'ny tantaran'ny Netflix tamin'ny fiteny tsy anglisy.
Ahoana ny fomba ahazoana mozika tsy misy mpanjaka amin'ny horonan-tsarinao
Ireo tranonkala manolotra mozika tsy misy mpanjaka dia nanjary malaza teo amin'ny tranonkala noho ny fahombiazan'ny YouTube sy ny fananganana azy, androany izahay dia manome anao ny sasany amin'ireo tranonkala malaza indrindra hahazoana mozika maimaim-poana.
WhatsApp Plus, ilay fampiharana manafina virus mampidi-doza
Mazava ho azy fa mihoatra ny iray amin'ireo nanatrika no nahita ity fampiharana WhatsApp Plus ity tao anaty chat ...
Sonos Play: 5 dia iray amin'ireo mpandahateny marani-tsaina avo indrindra eny an-tsena, nandinika azy izahay
Ho asehonay aminao ny antony nametrahan'ity mpandahateny ity ho iray amin'ireo sandan'ny vola tsara indrindra ho an'ireo mpampifandray feo sy fampifanarahana.
Mahazo mpanadio banga Rowenta Air Force 360 ​​miaraka aminay maimaim-poana
Te hanana Rowenta Air Force 360 ​​maimaim-poana ve ianao? Mba hanaovana izany dia mila mandray anjara amin'ilay raffle izay hoentin'ny Actualidad Gadget nataon'i Rowenta ianao amin'ny herinandro ambony.
Sintomy ny kopian'ny data Facebook rehetra anay
Aorian'ilay tantara ratsy any Cambridge Analytica dia tokony hijanona tsy hieritreritra izay tena fantatry ny Facebook momba antsika isika. Raha mbola tsy fantatrao dia hanampy anao aho hanala ny takamaso mba hahafahanao misintona kopian'ny data Facebook rehetra anay ary manomboka mihozongozona.
Sary voasivana amin'ny iPhone X volamena
Ny iPhone iPhone X volamena dia efa tafaporitsaka ary voamarina FCC ankehitriny. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona Apple vaovao izay efa misy ny sary voalohany.
SEGA dia manambara ny Mega Drive Mini hijoro amin'ny Nintendo
Nintendo dia efa naneho azy tamin'ny kinova Mini an'ny console. Nefa mitandrema, satria toa tsy te hiala amin'ny fiaran-dalamby ny SEGA ary nanambara ny SEGA Mega Drive Mini ho an'ireo mpampiasa.
Nahita mpiasa 29 nizara vaovao tamin'ny mpanao gazety i Apple
Apple dia nanambara ny fepetra hanoherana ireo mpiasa mamoaka vaovao. Fantaro misimisy kokoa ny fepetra horaisin'ilay orinasa amin'ireo mamoaka vaovao amin'ny gazety.
Xiaomi dia mieritreritra ny hividy GoPro
Xiaomi dia hieritreritra ny hividy GoPro. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny orinasa sinoa te-hividy marika fanta-daza amin'ny fakantsary fanatanjahan-tena.
Ahoana ny fomba hijerena sy hamafana ny tantaram-piainan'ny Google Maps
Raha reraky ny fahalalan'i Google ny toerana itodihanao ianao, tonga ny fotoana hanadinihana sy hamafana ny tantaran'ny toerana misy ny Google Maps
Nisy fakan-tsarimihetsika BQ nipoaka sy may tao am-paosin'ny tovolahy iray avy any Pamplona ka nahatonga ny fahamaizana
Ny tongotry ny zaza 14 taona avy any Pamplona dia niaritra fahamaizana 1 degre vokatry ny ...
Toy izany no ampiasaina ny Focus Mode na ny Portrait Mode amin'ny Instagram
Ny Mode Portrait ao amin'ny Instagram dia nantsoina hoe Mode Focus ary mamela anao hanao selfie amin'ny sehatra hafa noho ny fanadihadiana lalina nataony. Atoro anao ny fomba hampiasana azy.
Ny mpitantana teny miafina tsara indrindra
Mitady mpitantana teny miafina tsara indrindra? Ampidiro ary fantaro ny 5 tsara indrindra mba hitazonana ny teny miafinao ho azo antoka sy ampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana.
Fitaovana Android mifanentana amin'ny Fortnite
Ny iray amin'ireo lalao fanambarana, ho an'ny fitaovana finday, tao anatin'ny 4 volana lasa izay tamin'ity taona ity dia ny Fortnite, tsy misy ...
Ny angon-drakitra Mark Zuckerberg koa dia natolotr'i Cambridge Analytica
Na ny mpanorina ny Facebook aza, Mark Zuckerberg, dia afa-bela tamin'ny fangalarana data manokana izay namidy taty aoriana ...
Dodocool DA158, nandinika ireo tabataba ireo izahay izay nanala ny sofina an-tsofina loatra
Dodocool DA158 dia headset karazana Bluetooth sy headband. Izy ireo koa dia manana fanafoanana ny tabataba ary sarany be amin'ny fifaninanana.
Mbola lavitra ny fandefasana ny PlayStation 5
Na eo aza ny tsaho sasany milaza fa afaka manomboka ny taranaka fahadimy amin'ny PlayStation i Sony amin'ny taona ho avy na amin'ny faran'ity taona ity, dia toa manondro ny zava-drehetra fa mbola hiandry roa taona vitsivitsy farafaharatsiny isika.
Spotify dia mikasa ny hanao ny drafiny maimaimpoana ho malefaka kokoa
Spotify dia hanome tombony bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa ny drafitra maimaimpoana. Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny orinasa soedoà hisarika mpampiasa bebe kokoa amin'ny sehatra misy azy.
Ny elanelan'ny fahitalavitra vaovao miaraka amin'ny AMD FreeSync avy any Samsung dia eo akaiky eo ary hahasarika mpijery izay mandraka ankehitriny dia mihidy amin'ny fampiasana mpanara-maso,
Fotoana izao hijerena hoe hatraiza ny akon'ny famoahana data sy ny voina tao amin'ny Cambridge Analytics, noho izany dia hasehonay aminao ny fomba hahitanao raha iray amin'ireo voakasik'izany ianao.
Ahoana ny fomba hanoloana HHD mora ho an'ny SSD amin'ny solosaina finday
Hampianatra anao ny fomba hanoloana mora foana ny HHD amin'ny SSD amin'ny solosaina finday izahay, miaraka amin'ireo torohevitra fototra hahafahanao manao izany amin'ny tenanao.
Ny ZTE Iceberg dia hanana marika roa eo amin'ny efijery
Ny famolavolana ny ZTE Iceberg dia mampiseho marika roa eo amin'ny efijery. Fantaro bebe kokoa momba ny famolavolana ny maodely vaovao an'ny marika izay tsy ampoizina amin'ny filokana amin'ny marika roa.
Google dia manova ny fikarohana sary indray, ary manampy famaritana
Google dia niditra tao amin'ny motera fikarohana sary indray tamin'ny alàlan'ny fanoritana famaritana kely ny sary asehony amintsika.
Andro vitsivitsy sisa hanararaotana ny tolotra amin'ny PlayStation Store
Izahay dia manome anao famintinana ireo tolotra izay tokony tsy tokony ho diso avy amin'ny PlayStation Store ianao mba hanana fotoana be dia be hitsitsiana euro vitsivitsy.
Izahay dia mamakafaka ny Western Digital SSD, maodely WD Green an'ny 240 GB
Hodinihintsika ny iray amin'ireo fahatsiarovana SSD mahasoa indrindra, ny 240 GB WD Green SSD. Mijanona aminay ary fantaro ny antony nahatonga azy io ho iray amin'ireo kapila mafy amidy.
Tian'ny Twitter ny hampiasantsika ny fampiharana azy ho an'ny finday fotsiny ary efa ho tonga eo
Ny tambajotra sosialin'i Jack Dorsey, iray amin'ireo mpanorina ny Twitter, dia mikasa ny hanova ny Twitter API miaraka amina fanovana vitsivitsy izay hahatonga ny fangatahana antoko fahatelo ho an'ny iOS sy Android tsy misy ilana azy.
Herinandro vitsivitsy miaraka amin'ny HomePod: mbola ho avy ny tsara indrindra
Nahazo marika tsara ny HomePod raha ny kalitaon'ny feo no resahina, fa ny tsara indrindra mbola ho avy raha tena matotra momba azy i Apple.
Sary maro hafa no tafaporitsaka izay ahafahantsika mahita ny LG G7 ThinQ akaiky
Tsikelikely, betsaka kokoa ny fivoahan'ny LG G7 hita ary anio no tena miharihary tato anatin'ny herinandro vitsivitsy na dia toa te hanafina ilay "notch" aza izy ireo.
Google dia mizaha hitsin-dàlana amin'ny Chrome hanoratany Emojis
Miasa i Google mba hahafahanao manoratra emoji na emotika ao amin'ny Google Chrome amin'ny fomba mora kokoa. Azonao atao ny manandrana azy amin'ny alàlan'ny Google Chrome Canary
Ny Facebook dia hamela anao hamafa hafatra ao amin'ny Messenger
Ny Facebook Messenger dia hamela ny mpampiasa hamafa hafatra. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa tonga amin'ny fampiharana ary rehefa nambara ny fahatongavany.
Amazon dia hamoaka vola 1.000 tapitrisa amin'ny fampisehoana amin'ny efijery kely "The Lord of the Rings"
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny andiany vaovao an'ny The Lord of the Rings, dia manondro fa mety ho ny andiany lafo indrindra amin'ny tantara rehetra io, miaraka amin'ny teti-bola 1.000 tapitrisa dolara.
Manantena i Boom Supersonic hanana ny fiaramanidina vaovaony amin'ny taona 2023
Rehefa elaela tsy nahalala na inona na inona momba ny fivoaran'ny fiaramanidina supersonic vaovao Boom Supersonic dia nanambara ihany ny orinasa tamin'ny farany fa manantena ny ho afaka hamonjy ireo singa voalohany amin'ny 2023.
Ahoana ny fomba hamafana ny tantaran'i Google
Raha manahy momba ny tsiambaratelon'i Google ianao ary te-hamafa ny tantara rehetra izay notehirizin'i Google momba anao, etsy ambany dia asehonay anao ny dingana rehetra hanarahana anao hahafahana mamafa ny tantaran'i Google. Esory izay soritry anao amin'ny Internet, toerana, fampiharana ary maro hafa!
Xiaomi dia mandray 10% amin'ny tsenan'ny smartphone any Espana
Tamin'ny volana novambra 2017 lasa teo, nanambara ny fahatongavany eto amintsika i Xiaomi ary amin'ity fotoana ity ihany ...
Ny autopilot an'i Tesla dia mitohy tsy mahomby amin'ny toerana iray nitrangan'ny lozam-pifamoivoizana [Video]
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, vaovao roa henjana momba ny fiara mizaka tena misy vokany mahafaty amin'ny tranga roa, no nampihontsona ny gadona tsara ...
Tonga any Etazonia amin'ny fomba ofisialy ny Olympus PEN E-PL9
Ary farany, rehefa ela ny tapa-bolana dia tonga tamin'ny fomba ofisialy tany Etazonia ny Olympus PEN E-PL9. Ireo mpampiasa eto amin'ny firenena dia efa afaka manao an'ity fakantsary ity izay misongadina amin'ny endriny Retro ary manana fiasa toy ny fandraisam-peo 4K.
Raha mitady client torrent ianao hisintona ireo karazan-drakitra ireo, dia hasehonay anao hoe iza no mpanjifa falehan-driaka tsara indrindra hita eny an-tsena ary koa multiplatform io.
Nambara ny antsipiriany lehibe momba ny Google Pixel 3 manaraka
Misaotra ny ekipa XDA Developers, mety ho tafaporitsaka ny antsipiriany lehibe momba ny fizarana manaraka amin'ny iray amin'ireo finday andrasana indrindra, ny Google Pixel 3.
Hifandray amin'i Asia sy i Aostralia amin'ny alàlan'ny tariby ambanin'ny ranomasina i Google
Vao nanambara i Google fa efa miasa amin'ny fametrahana tariby sambo mpisitrika vaovao 9.600 XNUMX kilometatra hampifandray an'i Azia sy Aostralia izy ireo.
Ny WhatsApp beta dia ahafahanao mijery horonantsary YouTube tsy miala amin'ny fampiharana
Ity dia zavatra iray izay nangatahin'ireo mpampiasa ity fampiharana hafatra efa ela ity, ao amin'ny ...
Fandaharam-pomba fampiasan'ny mpiasan'ny Google hetsi-panoherana Pentagon Drone Program
Ny mpiasan'ny Google dia manohitra amin'ny fomba ofisialy ny fiaraha-miasan'i Google amin'ny tetikasa Maven, tetikasa iray ahafahan'ny olona sy ny zavatra ekena amin'ny sary milamina sy mihetsika.
Ny isan'ny Facebook tratry ny raharaha Cambridge Analytica dia tafakatra 87 tapitrisa
Telo herinandro taorian'ny nahalalana ny tantara ratsy momba ny fanitsakitsahana data Cambridge Analytica, nanamafy ny isan'ny mpampiasa voakasik'izany ny Facebook: 87 fa tsy 50 tapitrisa.
Nanivana ny volavolan'ny Xiaomi's Black Shark talohan'ny nanolorana azy
Nivoaka an-tsokosoko tamin'ny sariny voalohany ny Black Shark an'i Xiaomi. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona gamer an'ny marika sinoa izay haseho amin'ny fomba ofisialy ao anatin'ny herinandro mahery iray amin'ny hetsika iray.
Miato ao amin'ny iFixit ihany koa ny iPad vaovao taorian'ny nitoraka azy
Ny iPad 2018, toy ny tranga misy amin'ireo fitaovana Apple maro hafa, dia tsy afaka mandray ny fankatoavana iFixit.
Ny fizarana Spotify dia latsaka eo amin'ny 8% aorian'ny fandehanana ampahibemaso
Andro iray aorian'ny nanombohana ny Spotify teo amin'ny tsenambola dia misy fiakarana sy fidinan'ny sandan'ny tsirairay ...
Ny tsy fahombiazan'ny Pokémon GO Fest dia mitentina 1,5 tapitrisa $ Niantic
Niantic dia handoa $ 1,5 tapitrisa amin'ny Pokémon GO Fest. Fantaro bebe kokoa momba ny tambin-karama izay tsy maintsy aloan'ny orinasa amin'ny tsy fahombiazan'ny hetsika any Chicago.
Ny CEO OnePlus dia mampiseho ny endri-kintana OnePlus 6
Ny fanombohana lehibe manaraka dia ny OnePlus 6 ary araka ny fivoahana sy ny toetra efa nanamafisan'ny CEO azy manokana, dia toa tsy handiso fanantenana olona izaitsizy izany.
Tifitra niaraka tamin'ny efatra naratra tany amin'ny biraon'ny YouTube any California
Ny masoivohon'ny YouTube any California dia nahazo fitsidihana vehivavy mitam-piadiana, izay hatreto dia namela olona 4 naratra tamin'ny fahasamihafana isan-karazany.
Logitech Harmony 950, lavitra iray hifehezana ny fitaovanao rehetra [ANALYSIS]
Logitech Harmony 950 izay mahay mifehy vokatra elektronika marobe tsy hita isa ao an-tranontsika, manomboka amin'ny mari-pana mankany amin'ny decoder Movistar +, anio dia fakafakainay izany.
Ny Instagram dia nampihena be loatra ny fidiran'ny mpandrindra amin'ny angon-drakitry ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny API, ka izany no mahatonga ny ankamaroan'ny fampiharana an'ity karazana ity tsy hiasa intsony.
Apple dia hampiasa ny mpikirakira azy manokana ao amin'ny Mac
Apple dia manary ny Intel ary hampiasa ireo mpikirakira azy manokana ao amin'ny Macs.
Smart Light Bulb sy Smart Socket, jiro maranitra miaraka amin'i Koogeek [ANALYSIS]
Androany izahay manome anao ireo safidy roa mora indrindra sy azo ampiasaina indrindra hahatonga ny jiro hataonao ho hendry ao an-trano, miresaka momba ny Smart Light Bulb sy ny Smart Socket avy amin'i Koogeek izahay.
Hakaton'ny Google ny hanafoanana ny adiresiny afaka andro vitsivitsy
Ny mpandahatra adiresy Google, iray amin'ireo be mpampiasa indrindra, dia hampidina ny jamba amin'ny 13 aprily.
Tesla dia nanamafy fa nampandeha ny Autopilot nandritra ny fianjerana Model X
Ny autopilot dia navitrika tamin'ny lozam-pifamoivoizana Tesla. Fantaro misimisy kokoa ny antony nahatonga ny lozam-pifamoivoizana Tesla izay namoizana ain-doza ny mpamily iray tany California.
The Electric Mini Electric: "vintage" ety ivelany ary futuristic ao anatiny
New York International Motor Show 2018 dia nanomboka. Ary i Mini dia naneho ny hevitry ny Mini malaza. Mifantoka kokoa amin'ilay fotokevitra The Classic Mini Electric
Julian Assange dia lany tamin'ny internet nofaizan'ny governemantan'i Ekoatora
Nanapa-kevitra ny masoivoho ekoatoriana any London fa hanafoana ny fifandraisana internet izay nankafizin'i Julian Assange, noho ny fitsabatsabahana mitohy amin'ny governemanta hafa izay mety hanimba ny fifandraisan'ny governemanta.
Starlink: nankatoavina ny tambajotram-pifandraisana satelita malalaka misy alàlan'ny satelita 4.425
Nekena ny tambajotram-pifandraisana satelita an'i Elon Musk. Fantaro bebe kokoa momba ny tetikasa izay notanterahin'ilay mpamorona ny SpaceX izay nahazo ny fankatoavan'ny FCC.
Farany hianjera ny Tiangong-1 amin'ny alahady ho avy izao
Na eo aza ny fanantenana fa ny tsy fifehezana Tiangong-1 no nahatonga, tsy afaka nahafantatra izahay mandraka androany fa hianjera amin'ny tany amin'ny alahady 1 aprily 2018 ho avy izao.
Fiara mizaka tena iray dia voasazy noho ny fanakaikezany ny mpandeha an-tongotra amin'ny fiampitana zebra
Aseho tsikelikely fa ny mitondra fiara mahaleo tena dia tsy tonga lafatra araka ny nantenain'ny olona voalohany, satria mahazo onitra noho ny fomban'ny mpamily ihany koa izy ireo.
Sakano ny Facebook tsy hanara-dia anao amin'ity extension vaovao ity ho an'ny Firefox
Noho ny fanitarana Facebook Container an'ny Firefox, azonay atao ny mametra ny fidiran'ny tambajotra sosialy amin'ny angon-drakitra fitetezana anay rehetra, ankoatry ny fisorohana azy tsy hanaraka anay raha vao miala amin'ny tambajotra sosialy izahay.
Lior Ron, mpiara-manorina ny Otto dia nandao an'i Uber
Nandao an'i Uber tamin'ny fomba ofisialy ny mpiara-manorina an'i Otto Lior Ron. Fantaro misimisy kokoa momba ity fametraham-pialana ity sy ireo olana mahazo an'i Uber amin'izao fotoana izao taorian'ny lozam-pifamoivoizana nahafatesana herinandro vitsivitsy lasa izay.
Hodinihina indray i Tesla aorian'ny fianjerana amin'ny Model X
Hosedraina Tesla noho ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona iray niaraka tamin'ny Model X. Fantaro misimisy kokoa momba an'io lozam-pifamoivoizana io sy ny fanadihadiana ataon'ny orinasa ankehitriny.
Apple dia manolotra iPad mora vidy miaraka amin'ny Apple Pencil
Nanomana fampitahana eo amin'ny iPad 2017 sy ny iPad 2018 vaovao izahay mba hijerenao ny fahasamihafana amin'ity fanontana vaovao mora vidy ity tamin'ny fanontana iPad teo aloha.
Foxconn dia nanambara ny fividianana Belkin $ 866 tapitrisa
Foxconn dia mividy an'i Belkin amin'ny $ 866 tapitrisa. Fantaro bebe kokoa momba ity fifanakalozana fividianana vokatra izay misy fiatraikany amin'ny orinasa amerikana ity. Mbola mila omen-dry zareo mialoha.
Vaovao avy amin'ny loharanom-baovao avy any an-toerana no ho lohalaharana ao amin'ny Facebook
Tsy isalasalana fa ny tambajotra sosialy Facebook dia manao ny vaovao amin'ny antony maro ary ny malaza indrindra dia ny tantara ratsy ...
Facebook dia nanangana fitoriana efatra momba ny raharaha ratsy nataon'i Cambridge Analytica
Nanenjika inefatra ny Facebook noho ny raharaha ratsy nataon'i Cambridge Analytica. Fantaro bebe kokoa momba ny fitakiana ateraky ny tambajotra sosialy amin'ny olany amin'ny fiainana manokana.
Ny "contact" anao dia "manoratra" fa tsy tonga tampoka ilay hafatra. Inona no tena mitranga?
Fidirana izay handinihantsika izay mitranga amin'ny mari-pamantarana 'fanoratana' izay hita ao amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo rehefa misy hafatra manoratra.
Handoa anao i Netflix raha mahita lesoka eo amin'ny lampihazo ianao
Netflix dia manokatra ny programa valisoa ho an'ny mpampiasa. Fantaro misimisy kokoa momba ny programa valisoa an'ny sehatra streaming izay ahafahan'ny mpampiasa mahita bug.
Mpampiasa roa tapitrisa mampiasa tsy ara-dalàna ny Spotify
Mpampiasa roa tapitrisa no mampiasa Spotify nefa tsy mandoa na tsy manao doka. Fantaro bebe kokoa momba ny isan'ny mpampiasa izay tsy mandoa na manana doka amin'ny sehatra.
Instagram Shopping dia azo ampiasaina any Espana izao
Tonga ao Espana ny Instagram Shopping. Io no fomba tsara indrindra hametrahana rohy mividy amin'ny sarinao. Amin'ny endriny marika madio indrindra
Uber dia efa nanana olana tamin'ny fiarany mizaka tena talohan'ny nitrangan'ny loza
Uber dia efa nitolona tamin'ny fiara mizaka tena. Fantaro bebe kokoa ny olan'ny orinasa tamin'ny fiarany talohan'ny nitrangan'ny loza tamin'ity herinandro ity.
Elon Musk nanidy ny pejy Facebook an'i Tesla sy SpaceX
Elon Musk nanidy ny pejy Facebook an'i Tesla sy SpaceX. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapahan-kevitry ny mpanatanteraka hanidy ny pejy Facebook roa an'ny orinasany izay manana mpanaraka an-tapitrisany.
Hampiseho ny sakafontsika araka ny filaharany indray i Instragram
Nandritra ny fotoana fahira ambin'ny folo, hatramin'ny nividianan'ny Facebook ny Instagram, ny tambajotra sosialy sary dia hanova ny algorithm famahanana indray, ahafahantsika mampiseho ny atiny araka ny fotoana.
NASA nanidy teleskaopy Fermi habakabaka noho ny anomaly
Ny teleskaopy Nerm's Fermi dia nijanona tsy niasa intsony noho ny tsy fahombiazany. Fantaro misimisy kokoa momba ny tsy fahombiazana misy eo amin'ny teleskaopy ary nanery ny NASA hanidy vonjimaika azy io.
Izahay dia efa nandrava ny Firaketana an'izao tontolo izao Guinness ho an'ny unboxing lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny #RecordAliExpress
Jereo hoe inona no rakitsoratra an'izao tontolo izao ho an'ny unboxing lehibe indrindra eran-tany dia misy ary miaina ny majika amin'ny AliExpress amin'ny voninahiny rehetra
Ny HTC Vive Focus dia hamely ny tsena alohan'ny faran'ny taona
Ny taranaka vaovao an'ny HTC Vive, ny Vive Focus dia hamely ny tsena amin'ny faran'ity taona ity, herintaona aorian'ny nahatongavany tany Sina, izay misy azy ireo amin'izao fotoana izao.
Tompokolahy sy tompokolahy, niteny i Mark Zuckerberg
Ary izany dia taorian'ny fikomiana rehetra izay natsangana tamin'ny tranga Facebook sy ny angon-drakitra ...
Google, Twitter ary Facebook lany ny mpitantana fiarovana
Nametra-pialana ireo talen'ny fiarovana ny Facebook, Twitter ary Google. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fametraham-pialana ireo izay niteraka ahiahy maro teo amin'ny tsena.
Google Play Instant mamela anao hanandrana kilalao nefa tsy misintona azy ireo
Antsoina hoe Google Play Instant ny zava-baovao ary hahafahanay hitsapa mivantana ireo lalao ao amin'ny Google Play Store alohan'ny hisintomana azy ireo.
Facebook sy Cambridge Analytica eo imason'ilay rivodoza
Androany ny tambajotra sosialy Facebook dia mahazo vahana amin'ny lafiny rehetra ary ny zavatra mampidi-doza indrindra ho an'ny orinasa ...
Windows 10 dia hanohana ihany koa ny endrika sary HEIF
Ny fanavaozana lehibe manaraka izay atolotry ny Windows antsika, dia hisy ny fanohanana ny endrika famoretana sary HEIF
Niato tamin'ny fomba ofisialy i PS Vita tany Espana
Nijanona tamin'ny fomba ofisialy tany Espana ny PS Vita. Fantaro bebe kokoa ny fanapahan-kevitry ny orinasa hampiato ny marketing amin'ny console eto amin'ny firenentsika.
Tonga ny drafitra isam-bolana Amazon Prime vaovao
Ny goavambe fiantsenana amin'ny Internet dia nanambara drafitra isam-bolana vaovao ho an'ny mpanjifa sehatra izay maniry ny handray Amazon Prime
PUBG dia tonga amin'ny fitaovana finday hiatrehana ny fahombiazan'ny Fortnite
Tencent dia nijoro tamin'ny Fortnite tamin'ny alàlan'ny fanombohana haingana sy haingana ny lalao video PUBG tamina sehatra finday.
Ny ID ID an'ny IPhone X dia roa taona mialoha ny fifaninanana
Manamafy izany koa izy ireo ao amin'ny Reuters, mazava sy mivantana: ny Face ID an'ny iPhone X dia roa taona mialoha ...
KsixFitness Explorer 2, manadihady ny famantaranandro miaro tena miaraka amin'ny fizakan-tena herintaona [REVIEW]
Hiresaka ny lafiny mahaliana rehetra amin'ity akanjo entina natombok'i Ksix ity isika izay manana ny fananany lehibe dia afaka maharitra herintaona nefa tsy soloina ny bateria.
Fanadihadiana Energy Music Box 9
The Energy Music Box 9 dia mpandahateny mahaliana izay 90 € fotsiny dia manome hery 40 W ho antsika ary fifandraisana mahaliana amin'ny alàlan'ny Bluetooth, USB, microSD, FM Radio na Audio-in. Misy amin'ny loko roa (mainty sy fotsy) ary miaraka amina endrika minimalist dia sarobidy indrindra amin'ny safidy vola. Feo manara-penitra
Ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona voalohany niaraka tamin'ny fiara mizaka tenan'i Uber
Ny zavatra voalohany ary alohan'ny hanombohana ny vaovao dia manome fiaraha-miory ary ny fanampiana rehetra ho an'ny namana, fianakaviana ...
CAT S31 eo am-pelatanantsika, mety ho ny finday avo lenta mahatohitra indrindra eto an-tany [REVIEW]
CAT S31, terminal iray natao hanoherana ireo fotoam-piasana faran'izay mafy indrindra ary mety ho tonga mpiara-miasa tonga lafatra aminao amin'ny toe-javatra izay tsy mahazaka mora foana ny telefaona mahazatra.
Ny bug IOS 11 dia hita na dia tamin'ny fanambaràn'ny orinasa aza
Ny horonantsary Apple farany dia mampiseho amintsika indray fa na i Apple aza tsy nahavita namaha bibikely tao amin'ny iOS 11 rehefa nandrakitra ny fanambarana farany nataony.
Ny tanànan'ny Plattsburgh dia mandrara ny fitrandrahana Bitcoin sy crypto hafa. Fantaro bebe kokoa momba ity tanàna ity izay lasa voalohany nandrara an'ity hetsika ity noho ny fihinanana angovo goavambe.
Ny kinova Windows 10 manaraka dia hanokatra rohy Mail amin'ny alàlan'ny Microsoft Edge ihany
Iray amin'ireo fiasa vaovao izay andraman'i Microsoft ho an'ny kinova Windows 10 ho avy, hitanay fa adidiny ny manokatra ny rohy Mail ao amin'ny Microsoft Edge ihany.
Misaotra an'i Duolingo afaka mianatra mora foana ny Klingon isika
Raha mpankafy ny andiany Star Trek ianao ary efa naniry hianatra ny Klingon hatrizay nefa tsy nanana faniriana na te hahalala ny fomba hanaovana azy, misaotra an'i Duolingo dia afaka manao azy mora foana isika
Spotify dia manomboka fitsapana miaraka amin'ny mpanampy ny feony
Spotify dia manandrana ny mpanampy ny feony. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny sehatra streaming izay efa manolotra ny mpanampy voalohany azy izay hanamora ny fampiasana ny fampiharana.
Ahoana ny fomba handefasana rakitra lehibe
Raha hitantsika fa mila mandefa rakitra be dia be izahay, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny safidy maro azo atao hahavita azy io haingana sy mora.
Barcelona Games World dia nanova ny daty sy ny toerana amin'ny fanontana 2018
Amin'izao fotoana izao, maro aminareo no efa mahalala ny hetsika izay nitranga tao Barcelona, ​​efa elaela ...
Hita any Mexico izao ny karatra debit Amazon
Ilay goavambe Amazon dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika amin'ny fahatongavan'ireo vokatra vaovao ary amin'ity tranga ity dia manana vaovao ...
Ahoana no ahafantaranao hoe ohatrinona ny data finday lanin'ny mpampiasa tsirairay
Manahy ny amin'ny fandaniam-bola amin'ny rindranasa findainao? Te hahafantatra ve ianao hoe ohatrinona ny rindranasa tahiry toa ny Spotify, Netflix, YouTube, Facebook na ny hafa no mihinana azy? Ampidiro ary fantaro ny fomba hahalala ny fanjifana angona isaky ny fampiharana amin'ny findainao finday avo lenta.
Nikatona ny orinasa iray manokana momba ny fivarotana BlackBerrys natao ho an'ny heloka bevava
Ny orinasa Phantom Secure, dia niandraikitra ny fanovana ny BlackBerry mba ho fitaovana tsy hita maso izy ireo na ho an'ny toerana na ho an'ny resaka izay natao tamin'ny alàlan'ny fampiharana natao ho an'ity tanjona ity.
Microsoft dia manamafy fa ny Xbox One X dia hanasongadina ny FreeSync 2
Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy i Microsoft fa ny Xbox One X dia hanana teknolojia FreeSync 2 hahafahantsika mankafy lalao bebe kokoa sy tsara kokoa.
Nodimandry tamin'ny faha-76 taonany i Stephen Hawking
Ny astrofisikista malaza Stephen Hawking dia nodimandry ny marainan'ny 14 martsa 2018 tao an-tranony tao Cambridge niaraka tamin'ny havany.
SoundPeats Q12, mamakafaka ireo headphones misy vidiny mirary izahay
Miverina miaraka amin'ny famakafakana finday iray hafa ho anao izahay, ary tianay foana ny hijanonanao ... misaotra an'i Actualidad Gadget.
Ny Philips Hue ivelany voalohany dia efa nambara
Philips Hue: Efa nambara ny jiro vaovao eny ivelany. Fantaro bebe kokoa momba ireo jiro Philips vaovao ho avy tsy ho ela eny an-tsena.
Mampitandrina i Netflix fa tsy azo ampiasaina amin'ny Switch ny fampiharana azy noho ny Nintendo
Mampitandrina ny orinasa fa tsy misy amin'ny Nintendo Switch ny Netflix satria ny marika Japoney dia tsy liana amin'izany.
Manitatra ny fotoana hamafana ireo hafatra nalefa ny WhatsApp
Ireo tovolahy avy ao amin'ny Facebook dia nanitatra ny fotoana betsaka indrindra hahafahana mamafa ireo hafatra izay nalefanay taloha mihoatra ny adiny iray.
Te-hialana amin'ireo famandrihana manelingelina ireo ao amin'ny mailakao ve ianao? Unsubscriber dia serivisy maimaimpoana izay hanampy anao hatramin'ny voalohany
SoundPeats Q30, headphone tsy misy tariby miaraka amin'ny zavatra maro azo atao ary vidiny tena manintona.
2001 HAL: Space Odyssey izay naverina nisaotra an'i Alexa
Manana ny fanamarihana mahaliana momba ny andro izahay, asehonay aminao ny fomba nanovan'izy ireo ny Alexa Alexa ho HAL tamin'ny 2001: Odyssey habakabaka.
Fortnite Battle Royale dia tonga amin'ny telefaona finday
Fortnite Battle Royale dia havoaka amin'ny telefaona finday. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny lalao malaza amin'ny fitaovana finday amin'ny faran'ity taona ity.
Ahoana ny fomba hamerenan'ny Gmail
Manana antsasaky ny fiainana ao amin'ny kaonty Gmail-nao ve ianao? Eny, alohan'ny hitrangan'ny lesoka ary hanjavona ireo hafatrao - sy ny miraikiraikitra, manaova kopia backup. Azavainay ny fomba fanaovana azy
Avelan'ny Microsoft hampihetsika maimaim-poana ny Windows 10 indray i Microsoft
Raha te hampandeha maimaimpoana ny kopian'ny Windows 10 ianao, mandritra ireo andro ireo dia manana fotoana ahafahana manao izany indray ianao nefa tsy mila mandany euro iray akory.
EBay Superweekend dia eto, araraoty ireo tolotra tsy mampino ireo
Ny eBay Superweekend dia tolotra tokana izay miavaka ankoatry ny tolotra hatramin'ny 60%, izany no tolotra tsara indrindra.
"Zo manamboatra lalàna", volavolan-dalàna momba ny zon'antoka fanamboarana fitaovana elektronika
Amin'ity tranga ity dia lalàna na volavolan-dalàna miparitaka eran'i Etazonia, ...
Jon Favreau hanoratra sy hamokatra ny andiany Star Wars
Jon Favreu no hanoratra sy hamokatra ny andiany Star Wars. Fantaro bebe kokoa momba ny fanaovan-tsonia izay notanterahin'i Disney ho an'ny andiany voalohany miorina amin'ny andian-tsarimihetsika malaza.
Porsche Mission E Cross Turismo, ny SUV elektrika an'ny marika Alemanina
Porsche dia manohy miloka amin'ny fampidirana fiara elektrika feno. Ary ny manaraka hiseho dia ny Porsche Mission E Cross Turismo
Facebook Messenger Lite dia manolotra antso an-tsary
Tonga tao amin'ny Facebook Messenger Lite ny antso an-tsary. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa izay ampidirin'ny fampiharana chat maivana, izay toa tsy misy dikany firy.
Ireto no zava-baovao farany avy amin'ny tanan'ny Android P
Ireo tovolahy avy amin'ny Google dia nanambara farany izay ho lasa kinova manaraka amin'ny rafitra fiasa ho an'ny fitaovana finday tantanan'ny Android, antsoina hoe Android P
Efa misy ny kinova beta voalohany an'ny Android P
Ho hitantsika izay vaovao momba ny Preview an'ny Developer Android P, hahazoana hevitra bebe kokoa momba ny hoavin'ny Android.
Afaka mitsidika ireo valan-javaboary Disney avy amin'ny Google Street View ianao izao
Ny fakantsary 360º dia miasa tsara amin'ny arabe, tanàna, arabe ary zoro hafa amin'ny planeta misy antsika….
Toy izao ny endrik'i Huawei P20, finday avo lenta voalohany misy fakan-tsary 3
Sary "ofisialy" voalohany an'ny Huawei P20 vaovao, finday avo lenta voalohany misy fakan-tsary 3 ao aoriana
Apple te-hampitsahatra ny endrika iTunes LP amin'ny taona 2019
Apple dia hanala ny iTunes LP alohan'ny faran'ity taona ity. Fantaro bebe kokoa momba ny drafitry ny orinasa amerikana hamarana ity endrika ity izao.
Ahoana ny fomba fampidinana ireo GIF sy horonan-tsary avy amin'ny Twitter
Ny fampidinana ireo horonan-tsary na GIF izay hitanao matetika amin'ny kaonty arahinao ao amin'ny Twitter dia dingana iray tena tsotra ary amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay torolàlana kely momba ny fomba fampidinana horonan-tsary sy GIF avy amin'ny Twitter.
Ahoana ny fametrahana ny extension Chrome ao amin'ny Firefox
Hatramin'ny nanombohan'ny Firefox Quantum, ny fanitarana Chrome sy Opera dia saika mifanaraka tanteraka amin'ny Firefox, mila manatanteraka dingana kely fiovam-po kely fotsiny izahay amin'ny antsipiriany ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny teaser voalohany amin'ny vanim-potoana farany an'ny House of Cards dia misy izao
Netflix dia nanararaotra ny fankalazana an'i Oscar mba hamoahana amin'ny fomba ofisialy ny teaser voalohany ho an'ny vanim-potoana farany an'ny House of Cards, andiany iray izay nanjavonan'i Kevin Spacey tanteraka.
Mbola miady hatrany i Amazon sy Google: hanjavona ao Amazon ny vokatra Nest
Vaovao ratsy iray hafa ho an'ny google: ny vokatra automatique Nest home azy dia tsy hamidy intsony amin'ny Amazon commerce goavana an-tserasera
Song Maker: fitaovana vaovaon'i Google hamoronana mozika anao manokana
Song Maker: fitaovana vaovaon'i Google hamoronana mozika anao manokana. Fantaro bebe kokoa momba ity fitaovana ity izay ahafahanao mamorona mozika.
Afaka miloka amin'ny famoahana MacBook Air mora vidy i Apple
Ilay mpandalina KGI malaza, Ming-Chi Kuo dia mazava fa amin'ity fiandohan'ny taona 2018 ity dia ho taona ho an'ny MacBook Air, ary havaovan'i Apple amin'ny modely mora vidy kokoa izy io.
Mpandresy ny loka Oscar 2018
Ato ambany dia asehonay anao izay nandresy tamin'ny Oscar 2018, loka vitsivitsy nozaraina betsaka ary tsy nisy mpandresy lehibe
WhatsApp dia hamela anao hamafa ny hafatra nalefa mihoatra ny adiny iray lasa izay
WhatsApp for Android dia hahazo fanavaozana vaovao izay ahitanay fanatsarana tena lehibe amin'ny lafiny fotoana hamafana hafatra.
825 ny mpiasan'ny Amazon Spain niantso fitokonana noho io fifanarahana vaovao io
825 ny mpiasan'ny Amazon Spain niantso fitokonana noho io fifanarahana vaovao io. Fantaro bebe kokoa momba ny fitokonana izay nantsoin'izy ireo sy ny antony nahatonga izany.
Hampandre ny mpampiasa ny WhatsApp raha ampitaina ny hafany
Ny lahasa manaraka izay kasain'ny WhatsApp hapetraka dia hiandraikitra ny fampandrenesana ny mpampiasa rehefa mampita ny sasany amin'ireo hafatra nozarain'izy ireo taminay izahay.
Nokia hividy Unium hanatsarana ny fampisehoana sy ny fandrakofana Wi-Fi an-trano
Nokia dia manohy ny drafitra nomeny ary nanambara ny mety hividianana Unium, ity dia orinasan-rindrambaiko manokana ao ...
Hanampy serivisy antso an-tsary sy horonan-tsary ny Instagram
Facebook dia miasa mba hitondra fampisehoana bebe kokoa amin'ny Instagram. Ary ny zavatra farany hita dia ny hampifangaro ireo antso am-peo sy horonan-tsary
GitHub dia mijaly amin'ny fanafihana DDOS lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny Internet
Ny sehatra GitHub dia niaritra fanafihana DDOS lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny Internet tamin'ny 28 febroary, fanafihana izay nandresy tsy nisy olana, noho ny fiarovana ananany manoloana io karazana fanafihana io.
Microsoft Soundscape dia manampy ny olona sembana amin'ny fahitana an'izao tontolo izao
Microsoft dia nanangana fampiharana vaovao ao amin'ny Apple App Store, mikendry ny fanatsarana ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny olan'ny fahitana amin'ny tontolo iainany antsoina hoe Sondscape
Natsipin'i Sony tao am-baravarankely ny trano niaraka tamin'ireo lalao maimaim-poana tamin'ny PlayStation Plus tamin'ny volana martsa
Nanambara i Sony tamin'ny minitra farany ny lalao video izay ho maimaim-poana mandritra ny volana martsa miaraka amin'ny famandrihana PS Plus, ary hamela anao hisokatra amin'ny vavanao, Bloodborne GOTY ary Ratchet & Clanck.
Sony A7 III, endri-javatra an'ny Sony Full Frame vaovao
Sony dia nanolotra ny fanoloran-tenany vaovao amin'ny fakantsary fitaratra tsy misy fitaratra feno, fakan-tsary ahafahantsika mirakitra an-tsary 4k HDR, vahaolana 24 mpx ary endrika vaovao marobe.
Twitter mandefa ny fizarana tsoratadidy hahitanao ireo bitsika tianao hovakiana any aoriana
Twitter dia efa manana tsoratadidy hitsorohana bitsika. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao izay tonga tamin'ny tambajotra sosialy malaza ihany.
Ny LG G7 dia natolotra tao amin'ny MWC, saingy miafina
Nisy fampahalalana vitsivitsy nitranga momba ny karazana famelabelarana ho an'ireo olona tsara vintana izay nanehoan'i LG ny prototypes momba ny telefaona manaraka.
Ny "notch" ao amin'ny MWC na ny ady handika mandra-pahatongan'ny lesoka
Ny ady haka tahaka an'i Apple dia tsy misy fialan-tsasatra, vitsy ny fantsona naseho nandritra ny Mobile World Congress miaraka amin'ity "notch" ity.
Ny tsara indrindra amin'ny MWC 2018
Raha tapaka kely tamin'ny MWC ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao hoe iza no finday avo lenta tsara indrindra natolotra nandritra ny fanontana 2018.
Cambium Networks "Internet Extreme" dia hanome fifandraisana Wi-Fi na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta
Rehefa mandeha any an-tendrombohitra na eny amin'ny làlana miampita mandalo tendrombohitra aza isika, ny fifandraisana na ny fandrakofana an'ny ...
Ny sensor an'ny dian-tànana eo ambanin'ny efijery Vivo X20 Plus dia miasa na dia voarangotra aza
Ny fitsapana fanoherana izay nanaovana ny Vivo X20 Plus dia mampiseho amintsika fa na eo aza ny fikororohana ny faritra misy ny sensor dia manohy miasa tanteraka izy io.
Ady amin'ny micropayments amin'ny lalao video, dia hisy fiantraikany amin'ny marika famantarana ny taona
Any Etazonia dia mazava izy ireo fa tsy maintsy manomboka mifehy io anton-javatra io, ankehitriny dia hataon'izy ireo marika ireo lalao video ireo ary hisy fiantraikany amin'ny taona farafaharatsiny farafaharatsiny.
Vero dia toa ny tambajotra sosialy lamaody ary te hanongana Instagram
Tonga izao i Vero, tambajotra sosialy izay natao ho teôria te hampifandray anao amin'ireo olona tena mikarakara anao fotsiny.
Fampitahana izay ahitantsika izay tena mampiavaka ireo fantsona avo lenta an'ny Samsung sy Sony.
Ahoana no hividianana ny Samsung Galaxy S9 sy S9 + mora indrindra
Raha te ho iray amin'ireo mpampiasa voalohany mankafy ny Galaxy S9 ianao, nefa te-hihary vola ihany koa, zavatra sarotra vantany vao mahatratra ny tsena dia azonao atao ny mampiasa ny drafi-panavaozana atolotry ny orinasa anay.
Ulefone dia mandefa modely amin'ny efijery roa hisarika ny tsena
Ulefone T2 Pro sy ny mpiara-miasa aminy ny Ulefone X, ny fantsona misy efijery FullView miaraka amin'ny "notch" malaza an'ny iPhone X miaraka amin'ireo mpikirakira MediaTek hamonjy kely.
SEAT no mpanamboatra fiara voalohany eto an-tany mampiditra an'i Shazam
Ao amin'ny MWC dia manana, ankoatry ny finday avo lenta, tamba-jotra, takelaka ary fitaovana elektronika hafa, marika fiara. Raha izany dia…
Raha te hahafantatra ianao raha toa ka mendrika ny fanovana izany ary mandehana amin'ny Galaxy S8 + mankany amin'ny Galaxy S9 +, dia asehonay anao ny latabatra fampitahana izay ahafahanao manamarina raha mendrika izany fiovana izany na tsia.
Raha mbola tsy azonao antoka ny Samsung Galaxy S9 vaovao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fampitahana ny sainam-pirenena Samsung vaovao sy ny Galaxy S8
Movavi: ny mpamoaka sary sy horonantsary feno indrindra ho an'ny Windows sy Mac
Movavi: ny mpamoaka sary sy horonan-tsary feno indrindra ho an'ny Windows sy Mac. Fantaro misimisy kokoa momba ireo mpanonta ireo ireo izay hanamora ny fanovana sary na horonantsary ary hanome safidy maro anay.
Movistar Home sy Vodafone V-Home, ampitahainay ny serivisy vaovao mifandraika amin'ny trano
Ireo orinasa roa matanjaka indrindra eo amin'ny tsena nasionaly dia nanapa-kevitra ny hifidy amin'ny fanavaozana ny tranony izay hisarihana mpanjifa bebe kokoa, Movistar Home ary Vodafone V-Home.
ZTE dia mikendry ny 18: 9 miaraka amin'ny ZTE Blade V9
ZTE Blade V9, maodely vaovao misy akora premium sy fanekena ny tarehy amin'ny saina.
Nokia dia mandefa smartphone vaovao dimy, ao anatin'izany ny famoahana indray ny telefaona Matrix
Ny orinasa Finnish Nokia dia nanolotra ny rafitry ny MWC dimy amin'ireo terminal izay hahatratra ny tsena mandritra ny taona 2018.
Ny Galaxy S9 dia ofisialy izao: vidiny sy fiasa
Rehefa afaka volana maro, tsaho sy ny hafa, ny Koreana an'ny Samsung dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny sainam-piaramanidina vaovao ananan'ny orinasa izay ampisehoanay anao ny mombamomba azy rehetra, ny fampiasa ary ny vidiny
Ahoana ny fomba hanarahana ny #Unpacked an'ny Samsung Galaxy S9 sy S9 Plus anio
Raha vantany vao nanomboka ny MWC teo aloha, dia efa nahita ny vaovao avy amin'ny Huawei isika androany tolakandro ary anjaran'i Samsung izao ...
Alcatel manavao ny isan-karazany ny fitaovana ho an'ny teti-bola rehetra
Ny orinasa frantsay Alcatel, dia nanararaotra ny fankalazana ny MWC mba hanolorana amin'ny fomba ofisialy ny faritra misy ny terminal vaovao ho an'ny taona 2018, izy rehetra miaraka amina endrika 18: 9.
Ny fivarotana Xiaomi fahatelo any Espana dia nisokatra tao Barcelona
Nanokatra fivarotana voalohany tao an-tanàna i Xiaomi androany ary nosokafany tamin'ny fahagagana vitsivitsy toy ny fahitalavitra vaovao izay tsy ho ela dia ho tonga amin'ny tsenantsika amin'ny fomba ofisialy
Amazon hanokatra magazay vaovao tsy misy ATM vaovao enina
Noho ny fahombiazan'ny fivarotana voalohany an'ny Amazon, Amazon GO, dia nahazo famporisihana ny orinasa ary hanokatra fivarotana vaovao enina any Etazonia.
Raha indrisy fa very na nangalatra ny findainao ary tsy fantatrao izay tokony hatao hamerenana azy dia hasehonay anao ny fomba ahafahantsika miroso hanandrana hamerina azy na hanakana azy tanteraka.
Tena akaiky ny MWC ary ireto no sasany amin'ireo fitaovana antenainay hahita
Tsy misy isalasalana, efa akaiky ny fanombohan'ny MWC 2018 izahay ary efa samy manana ny zava-drehetra ny orinasa samihafa ...
Ity no hanafainganana ny kamio Tesla, ary hamela anao hanaitra tanteraka izany
Niresaka momba ny kamio Tesla nandritra ny volana maro izahay, ary fakantsary iray no nakana azy namakivaky ny araben'i Etazonia tamin'ny hafainganam-pandeha.
Sivanina ny masontsivana sy ny antsipiriany tena izy momba ny Galaxy S9, ireo no mampiavaka azy
Manana izany rehetra izany isika, ireo no fiasa voafaritra, famaritana ary sary tena izy an'ny Galaxy S9 izay hitantsika tamin'ny famoahana farany.
Inona no hitranga amin'ilay fiara nalefan'i Tesla teny amin'ny habakabaka? Azonao atao ny manaraka ny lalan'ny làlam-piainany mivantana
Ny fandefasana ny Falcon Heavy, ilay rokety SpaceX izay nitondra Tesla Roadster tao anatiny, dia nahatonga anay ho very hevitra ...
Ahoana ny fampanginana ny pejy web amin'ny Chrome
Ny horonan-tsary mandehandeha irery dia manelingelina anao amin'ny tranokalanao Amin'ny alàlan'ny Google Chrome dia azonao atao ny mampangina ireo tranokala ary asehonay anao ny fomba hanaovana azy
Ny kitendry Swype malaza ho an'ny smartphone dia tsy havaozina intsony
Ny kitendry Swype malaza dia tsy hahazo fanavaozana indray ary nesorin'ny mpandrindra tao amin'ny magazay fampiharana Apple sy Google.
Sony dia manomana "ny lalao maimaimpoana tsara indrindra hatrizay" ho an'ny volana martsa amin'ny PlayStation Plus
PlayStation manomana ny famoahana ny lalao maimaim-poana tsara indrindra amin'ny tantara amin'ity volana martsa ity miaraka amin'ny PS Plus.
Izany no fijerin'ny Galaxy S9 tafaporitsaka noho ny zava-misy mitombo
Ny tena zava-misy Augmented no bet ny orinasa Cupertino, Apple. Na izany aza, toa te-hivezivezy i Samsung ...
Chuletator sy safidy hafa amin'ny fanaovana chops
Tsy miaina amin'ny Chuletator irery ny olona. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny safidy tsara indrindra azonao jerena amin'ny Internet mba hanaovana chops izay hanampy anay handalo ny fanadinana nefa tsy mianatra.
Sivanio ny Sony Xperia XZ2 vaovao rehefa misy 5 andro sisa hanombohana ny MWC
Ary efa niresaka momba ny vaovao momba ny telefaona finday azo jerena ao amin'ny ...
Ny magazay Mi fahatelo nahazo alalana any Espana dia hisokatra ny asabotsy izao ao Barcelona
Alohan'ny hanombohako ny fampisehoana ny sasany amin'ireo fitaovana, finday avo lenta ary vokatra hafa mifandraika amin'ny MWC ...
Samsung dia manolotra ny SSD vaovao 30'72 TB
Samsung dia nanolotra ilay antsoina hoe kapila SSD manana fahaiza-manao avo indrindra manerantany, singa iray natao manokana ho an'ny fampiasana orinasa izay miavaka amin'ny 30 TB.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Nintendo's Mario dia misy ato amin'ity rakipahalalana ity
Raha miresaka momba an'i Mario isika, na 40 na 5 taona ianao, dia azo antoka fa fantatrao hoe iza no resahintsika. Mario mitondra miaraka amin'ny ...
Ny algorithm vaovao Google dia haminavina ny loza ateraky ny fo amin'ny fijerena ny maso
Ny algorithm vaovao Google dia haminavina ny loza ateraky ny fo amin'ny fijerena ny maso. Fantaro misimisy kokoa momba an'ity orinasa algorithm ity izay hampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny ho avy.
Ny rafi-pitsikilovana artifisialy an'i Google dia efa mahay manoratra lahatsoratra Wikipedia irery
Ireo injeniera Google dia nahavita nampita ny rafitry ny faharanitan-tsolika tamina fahaiza-manao ampy ka nahafahan'ity rindrambaiko ity nanoratra lahatsoratra Wikipedia tamim-pahaleovan-tena tanteraka.
Sivanio ny antsipiriany rehetra, ny vidiny ary ny sarin'ny Galaxy S9 vaovao
Ary zavatra matetika mitranga matetika ireo andro alohan'ny fampisehoana fitaovana ...
Manadio ny Microsoft Store i Microsoft, mamafa ny rindranasa rehetra mampiasa ny anaran'ny Windows
Microsoft dia nanomboka mamafa ny rindranasa rehetra izay mampiseho ny teny Windows amin'ny anarany na ny famaritana azy ireo mba hamitahana diso hevitra.
Waymo dia nahazo alalana hanolotra dia amin'ny fiara mizaka tena
Waymo dia nahazo alalana hanolotra dia amin'ny fiara mizaka tena. Fantaro bebe kokoa momba ny fahazoan-dàlana azon'ny orinasa mamela azy hifaninana amin'i Uber any Arizona.
Ny pixel dia mandefa fitaovana roa ho an'ny Photoshop sy Microsoft Office
Ny pixel dia namoaka fitaovana roa izay hiaraka tsy misy fotony miaraka amin'ny Adobe Photoshop sy Microsoft Office hanolotra traikefa asa milamina kokoa
Ireo manam-pahaizana izay nanoro hevitra ny Messenger Kids dia novatsian'ny Facebook
Araka ny voalazan'ny medium Wired, ny tolo-kevitra tsara voarain'ny application Messenger Kids avy amin'ny manam-pahaizana sy fikambanana sasany dia novidian'ny orinasan'i Mark Zuckerberg.
Dyson: Orinasa vacuum hanangana fiara elektrika premium telo
Orinasa mpanadio vacuum Dyson dia handefa fiara elektrika premium telo. Fantaro bebe kokoa ny drafitry ny orinasa hitondra ireo fiara ireo eny an-tsena.